NEO - Imwe app, zvese zvinhu mari
Kubhengi seSevhisi - BaaS
Makadhi White Label Chirongwa
Software seSevhisi - SaaS
SEPA: Yekupedzisira Gwara
NEO Mbiri-yezvinhu Kusimbisa (2FA) YeMushandisi Nongedzo
Zvinyorwa zvakagadzirirwa bhizinesi
Zvinyorwa zvakagadzirirwa account yako wega
Mari dzepasi rose
NEO ATM / POS Kunze Kwekunze mitengo
KUMWE APP, ZVESE ZVINHU MARI
Vhura account mumaminetsi kubva pafoni yako, uye ita kuti mari yako ienderere mberi
Vhura account yako
Kadhi, sangana nefoni
Manage makadhi mu-app, ingori tap
Guarantee pane mari
Dhawunirodha App Store Dhawunirodha Google kutamba
Imwe-nhanho mhinduro yekureruka kwemari manejimendi
Chero kwaunenge uri, shandisa smartphone yako kana chero chimwe chinhu kuvhura account yako isina kunetsa neyakajairika European IBAN. Yako kunyorera uine maviri chete magwaro ako achagadziriswa mukati maawa.
Mushandi wemubhadharo chishandiso
Yakazara dhata kuvanzika kutevedzera
100% yakajeka mari
Yechokwadi-nguva yekushandisa kuongorora
3D Security online kubhadhara
Vhura ACOUNT YAKO
Nzwisisa nharembozha inowanikwa
Ita uye uteedzere mashandiro ako emari nepombi yemunwe wako, 24/7.
Kuchinja kuri nyore
Transaction nhoroondo yekutarisa
Smart kubhadhara kunze kwenyika
Imwe nzira kubhangi rako remuno
Bhizinesi risina miganhu
Kuve expat kuri nyore
Chinja zvese zvekutengeserana kuita zvakanaka.
Sango paunenge uchitenga Isu tinoshanda nevatungamiriri vanotungamira masango pasi rese. Batidza Dyara Shanduko Yako pane zvese zvawakatenga uye ubatsire kubvisa yako kabhoni tsoka. Pamuti wega wega waunodyara unogashira chitupa chine ruzivo rwese rwakakosha pamusoro pemuti: mhando, nzvimbo, ruzivo rweprojekti yekudyara, CO2 muripo wemitengo uye zvimwe zvakawanda Muti-Nyika imusha kune mapurojekiti makumi mapfumbamwe ekudyara kubva ku90 nyika dzakasiyana.
163 710 miti yakasimwa muBurkina Faso
42 336 miti yakasimwa muMadagascar
47 485 miti yakasimwa muColombia
184 673 miti yakasimwa muKenya
Ona zvichangoburwa kubva BancaNEO munhau.
Mari zhinji dzeyambuko-muganho kubhadhara
Hapanazve maakaundi akapatsanurwa emari yega yega yekunze. Tumira uye gamuchira mari kutenderera pasirese mune makumi matatu neshanu ine yakawanda-mari IBAN yakabatana kune imwechete account.
Zvipo zvakakosha zve NEO makadhi
Ingoshandisa kadhi rako reNEO uye unakirwe akasarudzika madhiri, zvinopihwa & zvinobatsira.
Wana mukana wekuwana akasiyana siyana ekupa uye madhiri, kusanganisira chikafu newaini, kushopa, mitambo, varaidzo nezvimwe.
Yakachengeteka & Inzwi
Smart chengetedzo maficha ekuchengetedza yako mari yakachengeteka. Isu tinotevedzera epamusoro EMI chengetedzo zviyero zvekuchengeta yako mari uye neyako data zvakachengeteka
Mari yemutengi inochengetwa paakaganhurirwa account neNational Bank yeLithuania
Mari inodzivirirwa uchishandisa 3D yakachengeteka uye 2FA
Anti-kubiridzira software uye maitiro maitiro
Nyorera Akaundi muMaminetsi
Tora account yako yeNeo nhasi!
Tora Akaundi Yako yeNeo
Nekupa zvishandiso zvine hunyanzvi uye zvehunyanzvi kumusoro kuzviuru zvevatengi, tiri kushandura mamiriro emari epasirese, tichivhura mikana yechizvarwa chitsva chevashandisi vevashandi vezvemari nekusimudza huwandu hwavo hwekuverenga zvemari.
Bankin seSevhisi - BaaS
Software somunhu Service
Nzvimbo: Naituse tn 3, Tartu , 50409, Esitoniya
Bancaneo pamwe neSatchel inhengo huru yeMasterCard Europe yekuburitsa kadhi.
Bancaneo neSatchel inoshanda pasi peSatchelpay UAB (reg Nr. 304628112) iyo inopihwa rezinesi neSupervision Service Dhipatimendi reCentral Bank yeLithuania uye yakapa rezinesi rezvemagetsi mari Nr. 28, ine yekubhadharisa system inotora chikamu kodhi Nr. 30600, iyo inoita bhizinesi pasi pemitemo yeRepublic of Lithuania.
Copyright @ 2021 NEO. Kodzero dzose dzakachengetedzwa